Abazuza ngokudayisa upharafini bakhuphula inani lokuthenga | Scrolla Izindaba
Abazuza ngokudayisa upharafini bakhuphula inani lokuthenga
Njengoba abantu baseNingizimu Afrika bebhekene nokuhamba kukagesi okunamandla, kuneqembu labantu abamamathekayo.
Eminyakeni eyedlule abantu bayeka ukusebenzisa upharafini, ngenkathi kufika umthombo oyisisekelo wamandla kodwa ovele wakhanda umlilo oholele ekutheni kulahleke amakhulu ezimpilo zabantu abashona njalo ngonyaka kanye nezinye izinselela ezisabisa impilo.
Isimemezelo esenziwe ngu-Eskom kuleli viki esithi ukuhamba kukagesi kuzothatha cishe amahora amane ngosuku, siphoqe abathengi ukuthenga upharafini ukuwusebenzisa ukushisisa ezindlini zabo, ukukhanyisa kanye nokupheka.
Abahlenzeki abangenanembeza abasebenza ezitolo zezipaza bathila inzuzo kakhulu manje, ngokudayisa upharafini ngo-R15 ilitha eyodwa kunokuthi bawudayise ngenani okumele kube yilo eliyi-R8.99.
Amandla kagesi ngokuya nge-Eskom akhipha izindaba ezimbi ngemuva kwezimbi kuleli viki, ngokuthi ukunqamuka kukagesi kuzoqhubeka kuzekuphele iminyaka emibili.
Inkampani ithe isesikweletini sezigidi gidi eziyi-R488 futhi idinga ukuthayisela imali yokuthenga kolonyaka wezimali.
U-Eskom uthe leli banga lesine lokuhamba kukagesi lizoqhubeka kuzekuphele leli viki.